किन छोडे प्रचण्डले लाजिम्पाटको घर ? « Nepali Digital Newspaper
किन छोडे प्रचण्डले लाजिम्पाटको घर ?
२ पुष २०७४, आइतबार ०२:३२
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो निवासस्थान परिवर्तन गरेका छन् । चुनावको चटारो सकेर चितवनबाट राजधानी फर्केलगत्तै राजनीतिक मामलालाई भन्दा निवास फेर्ने विषयलाई बढ्ता चासो दिएर प्रचण्ड परिवार घर सरेको प्रचण्डनिकट श्रोतले जानकारी दिएको छ ।
गत विहिबारदेखि नै प्रचण्डको परिवार ललितपुरको खुमलटारस्थित एक घरमा बस्न थालेको छ । माओवादीनिकट शारदाप्रसाद अधिकारी नामक व्यक्तिको उक्त घरमा विदेशीहरू बस्दै आएकोमा प्रचण्डकै लागि खाली गराइएको पनि बुझिएको छ । सो घरका घरधनी अधिकारी पहिलेदेखि नै माओवादीलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएका पात्रका नाताले यसपटक माओवादी केन्द्रको समनुपातिक सूचीमा समेत परेका बताइन्छ ।
यसरी प्रचण्ड परिवार लाजिम्पाटको घर छोडेर अचानक किन ललितपुर सरेको होेला ? चासो उत्पन्न भएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार विवादास्पद व्यवसायी अजय सुमार्गीद्वारा प्रबन्ध गरिएको भनिएको लाजिम्पाटको घर सुमार्गीसँग खटपट बढेकोले छोड्ने मानसिकता प्रचण्डले पहिले नै बनाइरहेका थिए । सुविधाजनक घर फेला नपरेकोले मात्र उनी लाजिम्पाट बसिरहेका थिए । लाजिम्पाट निवास पुग्ने साँघुरो सडकका कारण पनि प्रचण्ड उक्त घर छोड्न चाहन्थे ।
तर, यो भन्दा पनि लाजिम्पाटको घर छोड्नुको बेग्लै अहम् कारण रहेको बुझिएको छ । पहिलेदेखि नै प्रचण्डपत्नी सीताले उक्त घरमा ‘नकारात्मक प्रभाव’ (अशुभ) अनुभव गर्दै आएकी थिइन् । त्यसमाथि पुत्र प्रकाशको अकस्मातको निधनपछि सीता उक्त घर तत्काल छोड्ने मानसिकतामा पुगिन् । पत्नी सीताको कुनै पनि कुरा काट्न नसक्ने प्रचण्डलाई पनि लाग्न थाल्यो कि सो घर आफुनो परिवारको निम्ति शुभदायक छैन । यसपछि तीव्र रूपमा अर्को घर खोज्ने काम सुरु भयो । पहिलेदेखि नै पार्टीलाई सहयोग गर्दै आएका व्यवसायी शारदा आफ्नो घर प्रचण्ड परिवारलाई उपलब्ध गराउन अग्रसर भए र प्रचण्डले पनि तत्कालका लागि सो स्वीकार गरेको बताइन्छ ।
पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालको निवासस्थान नजिकै रहेको खुमलटारको यो घर पनि अस्थायी रूपमा मात्र प्रचण्ड परिवारले प्रयोग गर्न लागेको हो । बुझिएअनुसार कुनै अर्को सुविधासम्पन्न घर फेला परेपछि यो घर छोड्ने मानसिकता प्रचण्डले बनाएका छन् । जे होस्, अहिले अचानक निवास परिवर्तन गर्नुको कारणचाहिँ पत्नी सीताको आग्रह नै रहेको बुझिएको छ ।
■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४४ ग्रीष्म ऋतु नलनामक संवत्सर नेपाल सं. ११४२ वि.सं. २०७९
कृषि-अधिकृतलाई ३५ किलोको मालासहित नागरिक अभिनन्दन
डम्बर निदाल, डडेल्धुरा डडेल्धुरा जिल्लामा आलु सुपर जोन कार्यालयका प्रमुखलाई किसानहरूले सम्मान तथा अभिनन्दन गरेका छन् । २०७३ सालदेखि जिल्लामा
दुई ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु
विकाश रौनियार, धादिङ धादिङको गजुरी गाउँपालिका-२ मलेखु बजारमा दुई वटा ट्रकले एकसाथ मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (९ जेठ २०७९ सोमबार, २३ मे…